स्वास्थ्य पेजजण्डिस हुँदा के खाने, के नखाने ? - स्वास्थ्य पेज जण्डिस हुँदा के खाने, के नखाने ? - स्वास्थ्य पेज
रगतमा विलिरुविनको मात्रा उच्च हुने अवस्था हो जण्डिस। यो हुँदा आँखा पहेँलो देखिने, पिसाब पहेंलो हुने, हातखुट्टा, हत्केला, पैताला पहेंलो देखिने हुन्छ। यो समस्या विशेष गरेर कलेजोको खराबीले गर्दा हुन्छ। कलेजाको पित्त आँतमा नपुगी सिधै रगतमा गएर मिल्छ, तब जण्डिसका लक्षणहरु देखिन थाल्छन्।
जण्डिस हुने विभिन्न कारणहरु हुन्छन्। संक्रमित पानी पिउनु, कुनै किसिमको जीवाणु वा विषाणुको संक्रमण हुनु, रक्सी अत्याधिक पिउनु, शरीरबाट अति रक्तस्राव हुनु, पौष्टिक आहारको कमी, पाचन क्रियाको गडबडी, चुरोट, सूर्ति, खैनिको प्रयोग, अनियमित खानपान, फोहोर बढी हुनु, पानी शुद्धिकरण नगरी पिउनुजस्ता कारणहरुले गर्दा जण्डिस हुनसक्छ।
खाना खान मन नहुनु, वाकवाक लाग्नु, ज्वरो आएजस्तो हुनु, भोक नलाग्नु, पिसाब पहेलो हुनु, आँखा पहेँलो देखिनु, निद्रा नलाग्नु, बेचैनी हुनु, नङ, छाला पहेलो देखिनु आदिजस्ता लक्षण देखिएमा जण्डिस हो कि भन्ने सम्झनुपर्दछ । कहिलेकाहीँ पेटको माथिल्लो भागमा दुखाइ पनि हुन्छ। हातले छाम्दा ठूलो भएजस्तो लाग्छ ।
के खाने र के गर्ने ?
हल्का, सुपाच्य, ताजा खाना–भात, जाउलो, चोकरसहितको गहुँको रोटी राम्रोसँग चपाएर खानुपर्दछ। उखुको रस, मह, पातलो दूध, ग्लुकोज पानी तथा गुलियो फलफूलको जुस खानुपर्छ भने मुँग, मुसुरो, रहरको पातलो दाल खान सकिन्छ। मूला, लौका, करेला, प्याज, पालुंगो, धनिया, मेथी, गाँजर, लसुन काउली खाने। मेवा, अमला, अंगुर, अनार, मौसम, स्याउ, गोलभेँडा, सुन्तलाजस्ता फलफूल खानुपर्छ। उमालेको वा शुद्धिकरण गरेको मनतातो पानी पिउने, बिहान एक गिलास मनतातो पानीमा कागती राखेर खान सकिन्छ। पूर्णरुपमा निको नभइञ्जेल आराम गर्नुपर्छ। हल्का व्यायाम गर्न सकिन्छ, तर गाह्रो अवस्थामा होइन।
के नखाने र के गर्ने ?
लापरबाही नगर्ने, जण्डिसलाई बेवास्ता गरे ज्यान पनि जान सक्छ। बजारमा ठेलामा वा खुल्ला बेच्न राखेका कुरा नखाने। पेट हल्का राख्ने, बढी परिश्रम नगर्ने, तरकारी, फलफूल धोएरमात्र खाने । फोहोर पानीबाट बँच्ने तथा चिल्लो पदार्थ, दही, मासको दाल, बढी गुलियो, माछा, मासु, अण्डाजस्ता पच्न गाह्रो हुने कुराहरु नखाने।
३ जेष्ठ २०७९, मंगलवार प्रकाशित